चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. गिरी नियुक्त - Ujyaalo Nepal
इजरेल र यूएईबीच ’ऐतिहासिक’ शान्ति सम्झौता
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. गिरी नियुक्त
By ujyaalo	 Last updated Sep 13, 2019 106
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वारिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्राडा गिरीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले उपलब्ध गराएको तीन जना डाक्टरहरुमध्ये प्राडा गिरीलाई नियुक्त गरेको हो। समितिले प्राडा गिरीलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। समितिले उनीसहित प्राडा सुरेन्द्र शेरचन र प्राडा शम्भुकुमार पहारीलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्राडा गिरी हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन्। उनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व रेक्टर हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार शुल्क निर्धारण समितिको सदस्यका रुपमा समेत उनले काम गरेका छन्। उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका नौ जना डाक्टरमध्ये साउन २८ र २९ गते अन्तर्वार्ता प्रस्तुतीकरणपछि तीन जनाको नाम सिफारिसमा परेको हो।
उपाध्याक्षको लागि आवेदन दिएका ११ डाक्टरमध्ये दुई जनाको भने आवेदन रद्द भएको थियो। प्राडा प्रमोदकुमार सर्राफ र प्राडा जेएन पाण्डेय ‘हिमाली’ले सो कुरा लिखित रुपमा नदिएपछि आवेदन रद्ध भएको थियो ।
प्राडा श्रीकृष्ण गिरि, प्राडा शम्भुकुमार पहारी, प्राडा सुरेन्द्र शेरचन, प्राडा राजेन्द्रप्रसाद साह, प्राडा रमेशचन्द्र सिंह, प्राडा यहुनचन्द्र शिवाकोटी, प्राडा तरुण पौडेल, डा निलमणि उपाध्याय र प्राडा पारसकुमार पोखरेलले आवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १६:२६
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वाइडेन कि ट्रम्प ? यस्तो छ मत सर्वेक्षण
नेकपाभित्रको विवादको पछाडि नक्सा सार्वजनिकीकरण र एमसीसी नै हो
विज्ञापनका लागि : Ujyaalonepalbusines[email protected], मार्केटिङः सन्तोष खड्का, मोबाइल नं. ९८५१०३०८८०